Soo dejisan Avast Secure Browser 80.0.3765.150 – Vessoft
WindowsInternetkaDareemaha WebkaAvast Secure Browser
Bogga rasmiga ah: Avast Secure Browser
Avast Secure Browser – browser ah oo ku salaysan mashiinka Chromium oo loogu talagalay in lagu ilaaliyo hawlaha internetka ee internetka. Barnaamijka wuxuu ku yimaadaa qalab si loo hagaajiyo heerka amniga ee looga hortago weerarrada shabakada iyo ilaalinta macluumaadka shakhsiyeed ee ka dhanka ah dambifalka. Avast Secure Browser wuxuu hayaa macluumaad ku saabsan laftiisa si uu u xaddido awooda uu ula socdo talaabooyinka isticmaalka internetka ee shabakadaha kala duwan, shabakadaha xayeysiinta, shirkadaha cilmi baarista iyo qalabyada kale ee raadraaca. Barnaamijkani wuxuu ka ilaaliyaa kombiyuutarka inaad ka hortagto isku dayga phishing by adoo xiraya website-yada khatarta ah iyo feylka la soo dajin karo ee faafiya nidaamka fayruusyada, ransomware ama spyware. Avast Secure Browser ayaa xayiraya xayeysiisyo dhibsado, waxay ka hortagtaa isku xirnaanshaha aan la isku hallayn karin iyo si toos ah u bilaabista Flash-content iyada oo aan la helin oggolaanshaha isticmaalaha. Software waxaa ku jira maamulaha erayga sirta ah iyo qalab si loo nadiifiyo taariikhda browserka, koobiyaal iyo xogta la helay. Avast Secure Browser wuxuu leeyahay qaybo dheeraad ah si uu u qariyo goobtaada oo aad u hagaajiso amniga inta lagu jiro internetka bangiga.
La-socoshada la-socoshada iyo anti-filtering
Badbaadinta ka soo horjeeda kordhin aan la isku hallayn karin
Xayiraadda xayeysiiska iyo xayeysiinta flash-content
Aqoonsiga HTTPS iyo qaabka xawaaraha
Soo dejisan Avast Secure Browser
Faallo ku saabsan Avast Secure Browser
Avast Secure Browser Xirfadaha la xiriira